မြစ်ကျိုးအင်း: ဘလော့ဂါ အငြိမ့်(၂)
xxx ခွန်နှစ်ထွေ...သီတာရယ်မှ ပတ်ကာဆင်း...သာတောင့်သာတယ်လေး.... နတ်ပြည်...တနင်း....နင်း...xxx
(xxx ဘုန်းတန်း...ဘုန်းတန်းတေဇာ..ဖြာဖြာရောင်လင်းပါလို့...မင်း...မင်း...မြတ်ထွဋ်ခေါင်ဗွေxxx) ၂
ရွာစားကျော် ရီနိုမာန်ရဲ့ လက်အဖျားမှာ စက်တပ်ထားသလို တီးကွက်နဲ့အတူ ဆွဲဆွဲငင်ငင် ဆိုလိုက်သော နတ်ချင်း သံရဲ့ အဆုံးမှာ ကြက်သွေးရောင် ပြည်ဖုံးကား ကန့်လန့်ကာကြီးမှာ ဘေးတဖက်တချက်သို့ ခွဲထွက် သွားကြ၏။ ဇာတ်စင်၏ ဘေးတဖက်တချက်စီမှ ဆလိုက်မီးရောင်များရဲ့ အောက်တွင် ပုဆိုးကွက်တုံး ကော်လံ လည်ကတုံး ၀တ်ပြီး ခေါင်းပေါင်းကိုယ်စီနဲ့ လူရွှင်တော် သုံးယောက် စပ်ဖြီးဖြီးမျက်နာများဖြင့် ပေါ်လာကြသည်။
သုံးယောက်သား ညီညီညာညာ ပရိတ်သတ်ဘက်ကို မျက်နာမူပြီး သကာလ လက်အုပ်ချီ၍ ဂါရ၀ ပြုလိုက်ကြသည်။
“ဟိုဘက်က ကို အိမ် မဟုတ်လားဗျ”
“အော်ကျန်းမာရေး တကယ်ကိုကောင်းကြရဲ့လားမေးတာပါဗျာ အတွေးမချော်စမ်းပါနဲ့”
“ဆိုင်းဆရာ ကိုရီနိုရဲ့ ဆိုင်းလက်သံလေးနားထောင်မကောင်းဘူးလားဗျာ”
“လက်သံကောင်းတာလဲ မပြောနဲ့လေ ဆိုင်းဆရာကြီး စိန်ဗေဒါ မျိုးဆက်ကိုးဗျ”
“အကောင်းအောက်မေ့လို့ နားထောင်ပါတယ် ပေါက်ကရတွေပြောနေတာကိုးဗျ”
“ဆိုင်းဆရာ ကိုရီနိုကို မိတ်ဆက်ပေးပြီးပြန်တော့ ကျုပ်တို့ လူရွှင်တော်တွေလည်း
“မှန်တာပေါ့ ကို အိမ်ရယ်”
“ကဲဒါဆို ကို မြစ်ကျိုးအင်းပဲ စပြီး မိတ်ဆက်ဗျာ”
“ဒီနာမည်ကို ကျွန်တော့်အမေက ကဗျာဆန်ဆန်ပေးထားတာဗျ ပြောရရင်အမေက ကဗျာရေးတာ ၀ါသနာ ပါတယ် ကျွန်တော့်ကို မွေးမယ့်နေ့မှာ အမေကချဉ်ခြင်းတခုတပ်တယ်တဲ့ အဲဒါက မျှစ်ကို အစိမ်းလိုက် စားချင်တာတဲ့လေ အဲဒီနေ့က အဖေကလည်း အိမ်မှာမရှိတော့ အမေလည်း စိတ်မရှည်တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ မျှစ်သွားခူးတယ်တဲ့ အမေက မျှစ်ချိုးရင်း ကျွန်တော့်ကို မွေးတာဗျ အဲဒီအချိန်မှာ အဖေက ဖဲဝိုင်း ရောက်နေတာတဲ့ အကျိုးပေးမယ့် ကလေးမို့လို့လား မသိဘူး တက်သမျှဖဲတွေက တစ်ကိုးကင်း တက်ပြီး အဖေ့ခမျာ အဖြစ်ဆိုးခြင်းတွေပဲ ၀င်နေလို့ အိမ်ကိုတောင် ပြန်မလာနိင်တာတဲ့လေ ..။
အဲဒါနဲ့အမေလည်း ကျွန်တော့်မွေးစဉ်က အဖြစ်လေးတွေပြန်တွေးပြီး ကဗျာဆရာမပီပီ ကာရံလေးနဲ့ မြစ်ကျိုးအင်းလို့ နာမည်ပေးခဲ့တာဗျ...”
“ကဲကိုဖိုးစိန်လည်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးအုံးဗျာ”
“အမှန်တော့ ခင်များတို့ခေါ်တဲ့ ဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ နာမည်က စာလုံးပေါင်း မှားနေတယ် အမှန်က ဖိုးစိမ် ဗျ...။
ဒီနာမည်ကို ကျုပ်အဖွားက ပေးခဲ့တာပေါ့....။အဖွားက အဖိုးကို အရမ်းချစ်တာဗျ။ ကျုပ်ကို မွေးပြီးနာမည်ပေးမယ်လုပ်တော့ အဖွားက အဖိုးအမြဲတမ်း စိမ် စိမ်ထားတဲ့..
အိမ်။....။“ဟေ့..ဟေ့လူ ဇာတ်စင်ပေါ်မှာ မဟုတ်တာတွေ မပြောနဲ့နော်“
“အာ...စကားတော့ ဆုံးအောင် နားမထောင်ဘူး အဖိုးအရက်နဲ့ စိမ် စိမ်သောက်တဲ့ ဆေးမြစ်ကလေးကို
မြင်ပြီး ဖိုးစိမ်လို့ နာမည်ပေးတာကို ပြောမလို့ဗျ”
မြစ်ကျိုးအင်း။...။“တော်သေးတာပေါ့ ဆေးမြစ်ကလေး ၀င်ကယ်သွားလို့”
ဖိုးစိန်။...။“ကဲ ကိုအိမ်ကလည်း လုပ်စမ်းပါအုံးဗျ”
ဖိုးစိန်။...။“အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့စတမ်း လုပ်စမ်းပါဗျ”
အိမ်။...။“မှားသွားလို့ ဟုတ်တယ်အလှည့်ကျတော့လည်း မနွဲ့စတမ်း ကိုယ်ပေါင်ကိုယ် လှန်ကုတ် ရတော့မှာပေါ့
ခင်များတို့က အိမ် လို့ အလွယ်ခေါ်နေပေမယ့် ကျနော့်နာမည်အပြည့်အစုံက အိမ်တိုင်ကျိုးဗျ”
အိမ်။...။“ ဒီလိုဗျ ဒီနာမည်က ကျနော် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အရပ်ကပေးတဲ့ နာမည်ဗျ လူရွှင်တော် မလုပ်ခင်
ကျနော်က သဘောင်္သား လုပ်လိုက်သေးတယ် အိမ်ထောင်ကျပြီး သဘောင်္က ပထမဆုံးပြန်လာတဲ့ညပေါ့ဗျာ
မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်တိုင်တချောင်း ကျိုးပါရောဗျာ”
အိမ်။.....။“အထင်မလွဲကြပါနဲ့ အဲဒီညက ငလျင်လှုပ်လို့ပါဗျာ”
ဖိုးစိန်။...။“အော်..ကျုပ်က နွားသိုး ကြိုးပျက်ပြီး အိမ်တိုင်ကိုလာဆောင့်တာထင်လို့ဗျ”
အိမ်။....။ “အဲဒါနဲ့အရပ်က ကျနော့်ကိုအိမ်တိုင်ကျိုးလို့ ခေါ်ကြရာကနေ အခုတော့ အိမ်ဆိုတဲ့ နာမည်တွင်သွားတာပါပဲဗျာ”
မြစ်ကျိုးအင်း။...။“တော်သေးတာပေါ့ ငလျင် ၀င်ကယ်သွားလို့”
ဖိုးစိန်။...။“ကိုအိမ်က အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အကြောင်းပြောလို့ ကျုပ်သတိရသွားတာ တခုပြောရအုံးမယ်
ကျုပ်ပြီးခဲ့တဲ့လက ရန်ကုန်ပြန်တော့ အိမ်တိုင်ကျိုး ရဲ့ မိန်းမက လာတွေ့တယ်ဗျ သူ့ယောကျာင်္း လူကြုံ ထည့်ပေးလိုက်တာ လာယူတာတဲ့....။သူလာတော့ သူ့သားအကြီးဆုံးကိုပါ ခေါ်လာတာနဲ့တူတယ်ကွ သူ့သားကလည်းကွာ အိမ်တိုင်ကျိုးနဲ့ နဲနဲမှ ရုပ်မတူဘူးဟေ့...အမ်မယ် ရုပ်သာမတူတာ အသက်ကတော့ အိမ်တိုင်ကျိုးနဲ့ အတူတူလောက်ပဲကွ”
“ဂွမ်း” ဖိုးစိန်ခေါင်းအားလူရွှင်တော်များမှ ၀ိုင်းရိုက်လိုက်ကြသည်။
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“ကဲကဲ ကျုပ်တို့ချည်းပဲ ပျက်လုံးထုတ်နေလို့လည်း မပြီးသေးဘူး အများမျှော်လင့်နေကြတဲ့
မင်းသမီးလေးလည်းပွဲထုတ်အုံးမှကိုးဗျ အပြောလေးတွေလျှော့ပြီး အလုပ်လေးနဲ့ သက်သေပြကြပါစို့ ...
ကဲ ကို အိမ်တိုင်ကျိုးရေ ခင်များပဲ ခေါ်ပေးဗျာ”
အိမ်။....။“အများပျော်စရာ ဘလော့ဂါတွေ တင်ဆက်တာမို့... အများပျော်စရာ ဘလော့ဂါတွေ တင်ဆက်တာမို့
အစဉ်အဆက်မှာ သဘင်သက်ကလေးရှိတဲ့ လှသွေးကြွယ် ရတက်မအေးစရာ မင်းသမီးလေး ကောင်းကင်ပြာရေ... အများအမြင်တင့်စေဘို့ အငြိမ့်ခွင်လေး ထွင်လိုက်ကြပါစို့...။”
ဖိုးစိန်။...။“ကိုအိမ်ခေါ်တာ မင်းသမီးက ထွက်မလာပါလားဗျ ”
မြစ်ကျိုးအင်း။...။“ခဏလေး ခဏလေး မင်းသမီး နှုတ်ခမ်းနီဘူးပျောက်နေလို့ ကွမ်းဝါးနေတယ်”
ကောင်းကင်ပြာ။....။“လာပါပြီရှင် ..အကိုတို့ရေ မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်”
ဖိုးစိန်။....။“ပရိတ်သတ်ကြီးက မင်းသမီးလေး ဘယ်လိုကမယ် ဘယ်လိုဆိုမယ် ဆိုတာကို မျှော်လင့်နေကြတယ်ခင်မျ”
ကောင်းကင်ပြာ။....။“အကိုတို့ရေ ခေါင်း ခါး ခြေ လက် ဤလေးချက် ၊မပျက်စေရ သုခုမ လို့ ဆိုရိုးရှိတယ် မဟုတ်လားရှင်”
ကောင်းကင်ပြာ။....။“ပြာပြာ့ရင်ထဲမှာ ကဗျာတွေရှိတယ် ကဗျာကို ချစ်တယ် ၊ကဗျာဆရာကို အဲကဗျာကိုမြတ်နိုးတတ်တဲ့ ပြာပြာက ကဗျာမမှီ စာမမှီ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ကဗျာလွတ်အက လေးကလိုက်ချင်တာက ဒီလိုပါတဲ့ရှင်....”
ဆိုင်းဆရာ ရီနိုမာန်ရဲ့ စည်းနဲ့ဝါး တီးလုံးသံ စထွက်လာချိန်တွင် ဇာတ်စင်တခုလုံး မှောင်ကျသွားပြီး ကောင်းကင်ပြာရောင် ၀တ်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေးကောင်းကင်ပြာရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဆလိုက်မီးတို့ ဖြန့်ကျက်ကုန်ကြ၏။နွဲ့ပျောင်းသော အချိုးအဆစ်များဖြင့် ကရင်း ကြည်လင်သာယာသော အသံလေးဖြင့် အငြိမ့်သီချင်းလေးကို ဆိုလိုက်သည်။
xxx ချစ်သူချက်(chat)နေ တို့ချက်နေ တို့နှစ်ယောက်ချက်နေ ....
xxx ချစ်သူဂျီပုန်းလုပ်နေရင် တို့နောက်တယောက်ချက်မယ်ပြင်...
xxxချစ်သူနဲ့လည်း ကြူချင်သေးတယ် အခြားသူနဲ့လည်း မူချင်သေးတယ်
xxx နေလုံးနီနီ အရှေ့မှာ ထွက်ခဲ့ပြီ...။
သီချင်းစာသားနှင့်လိုက်ဖက်စွာ အချိုးညီညီ အကအလှများကို တင်ဆက်ပြီးသွားသဖြင့် မင်းသမီးလေး ကောင်းကင်ပြာ ဇာတ်စင်နောက်သို့ မခို့တရို့လေး ၀င်သွား၏။ဇာတ်စင်ထောင့် တဖက်တချက်စီတွင် ထိုင်နေသော လူရွှင်တော်တို့ ထလာကြကုန်၏။
အိမ်။...။“ဘလော့ဂါတွေ လူရွှင်တော် လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဘလော့ဂါ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှမှ ကောင်းမယ် မဟုတ်လားဗျာ”
မြစ်ကျိုးအင်း။...။“မှန်တာပေါ့ဗျာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ ပြောသင့်တာပေါ့”
အိမ်။....။“ဒါဆို ကျနော်က ဘလော့ဂါနီတိလေးတွေ ရွတ်ပြချင်သေးတယ်ဗျာ”
အဖော်မပါ ကဲတော့ နှာနှပ်သူ လွန်မည်။
ဘလော့ဂါ ချွဲတော့ စာဖတ်သူရွံမည်။
လူကိုမျောအောင်ပေးတော့ ယုံတတ်သူ မုန်းမည်။
စာကိုမောအောင်ရေးတော့ စာဖတ်သူ ပုန်း မည်။
မတော်တဆ အဖျားလည်း မနင်းနဲ့
အကျော်အခွ ဇယားလည်း မခင်းနဲ့
မတော်တဆ အဖျားနင်းရင် ငယ်သံပါအောင် အော်ကြမည်။
အကျော်အခွ ဇယားခင်းရင် ငိုသံပါအောင် ဆော်ကြမည်။”
ဖိုးစိန်။...။“ခင်များတို့က ဘလော့ဂါဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ် ကျုပ်ရဲ့ သုံးတန်းရောက်နေတဲ့ သမီးလေးလည်း
ဖိုးစိန်။...။“အဟုတ်ပြောတာဗျ မြန်မာစာ ရေးတတ်ရင် ဘလော့ဂါ လုပ်လို့ ရတာပဲ မဟုတ်လားဗျ အမ်မယ် ခင်းများတို့ ကျုပ်သမီးကို အထင်မသေးနဲ့ဗျ သူက စာကြီးပေကြီးတွေပဲ ဘလော့ပေါ်တင်တာ”
ဖိုးစိန်။....။“သူ့အမေရဲ့ ချက်တင်ထဲက စာတွေ ၃ ပိုင်းခွဲပြီး တင်တာဗျ”
“ဂွမ်း” ကျန်တဲ့လူရွှင်တော် နှစ်ယောက်မှ ဖိုးစိန်ခေါင်းအား ၀ိုင်းရိုက်လိုက်ကြသည်...။
ဖိုးစိန်။....။“အခုလည်း အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ စာတွေ တင်မလို့ လုပ်နေတယ် အခန်းဆက် တင်မယ်ဆိုပဲ”
ဖိုးစိန်။....။“ က ကနေ အ အထိ ၄ ပိုင်းခွဲပြီး တင်မလို့တဲ့လေ”
လူရွှင်တော်များသံပြိုင်။.....။“““ xxx ဘူလေးလဲ ....အဲဒါ ဘူလေးလဲ xxx”””...........။
မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ကျုပ်မိန်းမ ကတော့ ဘလော့ဂါလုပ်တာ ပါစပ်ပြဲသွားတယ်”
မြစ်ကျိုးအင်။....။“ မတန်တဆ အလုံးကြီးတွေ မိန့်ခွန်းချွေရလို့လေ”
အိမ်။....။ “အခုရော သက်သာသွားပြီးလား”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“ရင်ကျပ်ရောဂါ ပါရသွားပြီ ”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“အချွဲတွေ ထွက်လာတာများလို့ ဆေးခန်းပြမှ ရင်ကျပ်ရောဂါ ရမှန်းသိတာဗျ”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“ အခုလား လေဖြတ်ပြီး ပါးတချမ်းပါ ရွဲ့သွားတယ် စကားပြောရင် အရင်လို မပီတော့ဘူးဗျ
ငါစိတ်ဆိုးအောင် မလုပ်နဲ့လို့ပြောရင် နာချိတ်ချိုးအောင်မရုပ်နဲ့ ဖြစ်နေပြီ”
အိမ်။....။“ အော် ဖစ်မှဖစ်ရလေ အဲ ယောင်ကုန်ပြီ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ”
လူရွှင်တော်များသံပြိုင်။.....။ “““xxx ဘူလေးလဲ ဒါလေးကဘူလေးလဲ xxx”””
အိမ်။....။“ ကျုပ်မိန်းမကြတော့ ဘလော့ဂါ လုပ်တာ အလုပ်ပါပြုတ်ရော ”
အိမ်။...။“အလုပ်မှာကိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဘလော့အတွက် သုံးလို့ သူဌေးက အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာလေ”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“တနေ့လုံး ဘလော့အိမ်လည် ထွက်နေလို့များလား”
အိမ်။....။“အိမ်လည်တာက နဲနဲပါဗျာ သူ့ဘလော့သူ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်နေလို့ဗျ”
ဖိုးစိန်။....။“တမျိုးပါလားဗျ ဘာအတွက် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်နေတာလဲ”
အိမ်။.....။“တခါဝင်ရင် သူ့ဘလော့က လာတဲ့သူ တယောက်တိုးလို့တဲ့လေ ”
မြစ်ကျိုးအင်း+ဖိုးစိန်။...။““xxx ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ်..ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲရှိတယ် ””ဖိုးစိန်။.....။“အဲဒါ အခုဘာအလုပ် လုပ်နေလဲ”
အိမ်။...။“၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်ရတာ ၀ါသနာပါလို့တဲ့ နတ်ကတော် လုပ်နေတယ်”
လူရွှင်တော်များသံပြိုင်။.....။ “““xxx ဘူလေးလဲ .. အဲဒါဘူလေးလဲ xxx ”””
ဖိုးစိန်။....။ “ထပ်ပြောရင် အောက်ကနေ အုတ်ခဲပျံတွေ ဖိနပ်ပျံတွေ လာတော့မှာ မို့လို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပြီး မင်းသမီးရဲ့ အလှည့်လေးလည်း ပေးရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ...။”
ဖိုးစိန်။...။“အခုအလှည့်ကျတဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ အများကြည်တဲ့ ဖွားကီပါပဲ ထူးထူးခြားခြား အစီအစဉ်လေး
ဖြစ်အောင် မင်းသားချောလေး လတ်လတ်ဇော် ကနေပြီး မကီကီနဲ့ တွဲဖက်ကာ နှစ်ပါးသွားကဏ္ဍလေးနဲ့
မကြာမှီ မင်းသားလေးဇော်မှ မင်းသမီးကီကီ လက်ကိုဆွဲပြီး ဇာတ်စင်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှ ထွက်ပေါ်လာ၏။
ဇော်။...။“နှမကလေးကီရေ မောင်ကြီးတို့ အများအမြင် ဘ၀င်ခွေ့စေဘို့ နှစ်ပါးခွင် တူယှဉ်မွေ့ရအောင်ပ ...ကကြစို့လေ”
မကီ။....။“အနားတချက်က ဖ၀ါးထပ်မျှ လိုက်ပါမယ့်သူပါ မောင်ကြီးရေ”
ဇော်။...။“ကဲ ဒါဆိုလည်း နှစ်ပါးသွား ကမယ် ဘုရားတရား တပေတော့ ကီကလေးရေ”
မင်းသားလေးဇော်ရဲ့ စကားဆုံးလျင် ဆိုင်းဆရာမှ မဟားတရား တီးလုံးဖြင့် နာမည်ကျော် ဒေ၀စ္ဆာရာ သီချင်းကို
ဇာတ်ကြမ်းတိုက်လေတော့သည်..။“xxx အို အသေပစ်မှာ... ရွှေချစ်တာ စည်းစိမ်တွေပဲ ...လုမယ်ကြံသမျှ ..ပစ်ကာမနှေးမယ့် လက်ကလေးပါကွဲ့
သားတွေစုရုံး ဘဘကြီးအတွက် အူကြပေတော့ xxx
xxx အို နေရစ်ပါ... အိမ်ထဲက ထွက်မလာပါနဲ့ .....စုလာရင်ဖြင့် ... ကြောက်နေရတဲ့ ဘ၀လေးပါကွဲ့
အမှားတွေစုထုံး ဘုရားကွယ်ရတဲ့ အထိလည်း ဖြစ်ပြီxxx
xxx အို ရွှေညစ်တာ... တန်းလျားက ခြင်ကိုက်လွန်းလို့ ....မျက်နာပြောင်တိုက်ပြီး... မဆင်းပေးတာ နားလည်ပါကွဲ့ မယားတွေစုဆောင်း ရွှေချောင်းတွေလည်းများခဲ့ပြီxxx ”နှစ်ပါးခွင်အား အပေးအယူ မျှမျှ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကပြီးသကာလ မင်းသားနှင့် မင်းသမီးတစ်ဦးကို တစ်ဦးဖေးမပြီး ဇာတ်စင်နောက်သို့ ၀င်သွားလေတော့သည်။
ဖိုးစိန်။....။“မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုသွားတဲ့ သီချင်းလေး မကောင်းဘူးလားဗျာ”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“ကောင်းဆို သီချင်းနာမည်ကိုက အသေညစ်တာ တဲ့လေ”
အိမ်။...။“ကဲကဲ ထောင်တန်တဲ့စကားတွေ ရပ်ပြီး ကျုပ်တို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်လေး ကို ပရိတ်သတ်သိအောင်
မြစ်ကျိုးအင်း။...။အလုပ်အကိုင်ဆိုလို့ ပြောရအုံမယ် မင်းတို့ငါကို လူရွှင်တော်ဆိုပြီး အထင်သေးချင်ကြတာလား
ဒီမှာ ငါက တပ်ထွက်ကွ”
“ဟေ့...ဟေ့ ဖိုးစိန် မင်းမညစ်ပါတ်နဲ့နော် ငါပြောတဲ့ တပ်ထွက်ဆိုတာ စစ်တပ်က ထွက်လာတာကို ပြောတာကွ”
“အေးပါကွ ငါကလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထွက်လာတာကို ပြောတာပါကွာ လုပ်စမ်းပါအုံး
“တကယ်တော့ ငါက လွဲချက်ကယ် နာခဲ့လို့ ရာထူးကအဖြုတ်ခံရတာကွ ”
“တနေ့တော့ ငါတို့တပ်ထဲကို အထက်လူကြီးလာတယ်ကွ ရောက်လာတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း မှာတမ်းတွေ
ချွေတာပေါ့ကွာ ငါလည်း ညက အိပ်ရေးပျက်ထားတော့ သူပြောတာတွေ သေသေချာချာ မမှတ်မိလိုက်ပါဘူး
အဲ...ညရောက်တော့ တပ်ရင်းမှူးက ငါ့ကိုခေါ်တွေ့တယ်လေ မင်းနေ့လည်က ဘာလို့ဂရုတစိုက် နားမထောင်တာလည်းတဲ့ ငါကလည်း ကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေတော့ ငါ့ကိုဒါဆို နေ့လည်က ဗိုလ်ချုပ် ဘာမှာသွားလဲတဲ့မေးပါလေရော ငါလည်းစိတ်ထဲရှိတာဖြေလိုက်တာ တခါတည်း အချုပ်ထဲ ရောက်ပြီး အလုပ်ပြုတ်တော့ တာပါပဲကွာ”
“ ဗိုလ်ချုပ်မှာ ဆိုမှတော့ ငါလည်း စကားလိန်နဲ့မေးတာထင်ပြီး ဗာဂျာမှုတ်လို့ ဖြေလိုက်မိတာ”
“ဂွမ်း” မြစ်ကျိုးအင်းခေါင်းအား ကျန်လူရွှင်တော်များမှ ၀ိုင်းရိုက်လိုက်ကြသည်။
မြစ်ကျိုးအင်း။...။“ မဟုတ်ဘူးလေကွာ ရှေ့တန်းမှာ ပျင်းနေရင် သီချင်းဆိုလို့ ရတယ်လေကွာ”
အိမ်။....။“သူငယ်ချင်းက အလုပ်ပြုတ်လာတယ်ပြောတော့ ငါအလုပ်ပြုတ်တာလေး သတိရမိသေးတယ်”
ဖိုးစိန်။...။“အော် ကို အိမ်ကလည်း အလုပ်ပြုတ်လာတာကိုး ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း ပြောစမ်းပါအုံးဗျ”
အိမ်။....။“ ကျနော် သဘောင်္သားဘ၀ကပေါ့ဗျာ တစ်ခါတော့ အတွေ့အကြုံရအောင်ဆိုပြီး ရေငုပ်သဘောင်္နဲ့
လိုက်သွားမိတယ် တခါတည်း အလုပ်ကို တန်းပြုတ်တာပဲဗျာ”
အိမ်။....။“အိုက်လို ပြတင်းပေါက်လေး ဖွင့်မိတာပါဗျာ”
“ဂွမ်း” အိမ်တိုင်ကျိုး ခေါင်းအား ၀ိုင်းရိုက်ကြကုန်တော့သည်။
ဖိုးစိန်။...။“ခင်များတို့ပြောတော့ ကျုပ်လည်း အားကျမခံ ပြောရသေးတာပေါ့”
ဖိုးစိန်။....။“ဟဲဟဲ ဟုတ်တယ် ကျုပ်စားသောက်ဆိုင်မှာ လုပ်တော့ စားသုံးသူမှာတဲ့ဟင်း မှားချက်ပေးလို့ အလုပ်ပြုတ်တာဗျ”
ဖိုးစိန်။...။“စားသုံးသူက ဥပါတဲ့ငါးကောင်လုံးကြော်မှာတာဗျ ဒါနဲ့ကျုပ်လည်း ငါးအထီးတကောင် သတ်ပြီး
“ကျုပ်တို့တွေချည်းပဲ ပျက်လုံးထုတ်တာလည်းကြာသွားပြီ မင်းသမီးလေးလည်း ကချင်နေရှာရောပေါ့
ကိုမြစ်ကျိုးအင်း ဒီတခါ ခင်များခေါ်ဗျာ”
“ဒီတခါ အလှည့်ကျတာက မင်းသမီး မဟုတ်ဘူးဗျ မင်းသားလေး လတ်လတ်ဇော်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အကအလှပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသားလေးဆိုတော့ သေသေချာချာ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့လေး ခေါ်ရမယ်ဗျ”
“တော်တော်ကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ စာစီလိုက်ရမှာပဲ”
ခေါ်သံဆုံးလျင်ဆုံးချင်း မင်းသားလေး လတ်လတ်ဇော် ခုန်ပေါက်ပြီး ပြေးထွက်လာသည်။
“ကလို့ရပြီလား ကိုဂျီးကျိုး ကချင်လှပြီဗျ ”
“ပရိတ်သတ်နဲ့ မိတ်မဆက်တော့ဘူးလား မင်းသားရဲ့”
“နောက်မှဆက်ဗျာ အခုတော့ ကချင်နေပြီ ကျွန်တော်ချစ်သူ အွန်လိုင်းပေါ်တက်မလာတာ သုံးရက်ရှိနေလို့
သူ့ကို ဒီလိုလေး ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်”
ပြောပြီးပြီးချင်း ဆိုင်းဆရာ ကို မျက်စပစ်ကာ ဂျွမ်းသုံးပါတ် ပစ်လိုက်တော့သည်။ဆိုင်းဆရာလည်း တားလို့ရလမ်း မမြင်သဖြင့် မင်းသားလေးလတ်လတ်ဇော်အတွက် အပူလုံးကြွ လူလုံးမလှတဲ့ တီးကွက်များဖြင့် ငိုချင်းချပေးရတော့၏။(xxx ချစ်သူလာသောညက အင်တာနက်မှန်ပါတယ်
xxx ချစ်သူမလာသော အခုရက် ကွန်နက်ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲကွယ်
xxx ပုဂံနက် ဘယ်လို စုတ်နေသလဲကွယ်
xxx ချစ်သူမုန်းလို့ ရှောင်ပြေးကာ ပုန်းနေတာလားကွယ်xxx။)
ညောင်နာနာ အသံလေးဖြင့် လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် ရှိုက်ကာရှိုက်ကာ နှစ်ခေါက်တိတိ ဆိုပြီးချိန်တွင် တိုက်ပုံလေး ပုခုံးပေါ်တင်ကာ တွံတေးသိန်းတန် စတိုင်ဖြင့် ဇာတ်စင်နောက်သို့ ၀င်သွားလေတော့သည်။
လူရွှင်တော်သုံးယောက်ကလည်း ထောင့်အသီးသီးမှ စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နာများဖြင့် ထလာကြသည်။
ဖိုးစိန်။....။“လူရွှင်တော်တွေရဲ့ သမားစဉ်အရ ကျုပ်တို့လည်း သံချပ်လေးထိုးကြရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ”
အိမ်။.....။“ဒါဆို ခင်များက အတိုင် ကိုတာဝန်ယူဗျာ ကျနော်နဲ့ မြစ်ကျိုးအင်းနဲ့က အဖောက်တာဝန်ယူမယ်”
ဖိုးစိန်။...။“စိတ်ချ...ကျုပ်က ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်လွန်းတယ် လို့တိုင်ပေးမယ် ခင်များတို့က မြန်မြန်ကျပါစေ လို့ဆိုကြ”
ဖိုးစိန်။...။ “ကုန်ဈေးနှုန်းကတက်လွန်းတယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။ “မြန်မြန်ကျပါစေ ဆုတောင်းကြစို့”
ဖိုးစိန်။...။“တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သူတွေ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။ “မြန်မြန်ကျပါစေ ဆုတောင်းကြစို့”
ဖိုးစိန်။...။“အဲလိုမဟုတ်ဘူးလေ ထာဝစဉ်သာ တည်တံ့ပါစေ လို့ ဆိုကြလေဗျာ ကဲပြန်ဆိုမယ်”
ဖိုးစိန်။...။“တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သူတွေ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။ “ထာဝစဉ်သာတည်တံ့ပါစေ”
ဖိုးစိန်။....။“နင့်ကြီးတော်ထာဝစဉ်တည်တံ့ပါလားဟဲ့ ဘာတွေဆိုနေမှန်း မသိဘူး ၀က်တုတ်ကွေးရောဂါ ကြောက်စရာ လူ့ပြည်ရွာက မြန်မြန်မောင်းထုတ် လို့ဆိုရမှာလေ ”
ဖိုးစိန်။.....။“ကဲပြန်ဆိုမယ် ၀က်တုတ်ကွေးရောဂါ ကြောက်စရာ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“လူ့ပြည်ရွာက မြန်မြန်မောင်းထုတ်”
ဖိုးစိန်။.....။“ကားသမားတွေက အမောင်းကြမ်းတယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“လူ့ပြည်ရွာက မြန်မြန်မောင်းထုတ်”
ဖိုးစိန်။...။မဟုတ်ဘူးလေကွာ ဒုက္ခရောက်မှာ အားလုံးပါပဲ လို့ ဆိုရမှာလေ ပြန်ဆိုကြ”
ဖိုးစိန်။.....။“ကားသမားတွေက အမောင်းကြမ်းတယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ဒုက္ခရောက်မှာ အားလုံးပါပဲ”
ဖိုးစိန်။....။“၂၀၁၀ လည်းရောက်တော့မယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ဒုက္ခရောက်မှာ အားလုံးပါပဲ”
ဖိုးစိန်။....။“နင်တို့လုပ်ပုံနဲ့တော့ ကားအပြာလေး စီးနေရအုံးမယ် စိတ်ညစ်တယ် တကယ်ပဲ ၂၀၁၀ ရောက်ရင်
နှစ်သစ်ရောက်ပြီလေကွာ အဲဒီတော့ တပြည်လုံးထွက်ကာ ပျော်ကြပါစို့ လို့ လိုက်ဆိုရမှာ ပြန်ဆိုမယ်”
ဖိုးစိန်။....။“၂၀၁၀ လည်းရောက်တော့မယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“တပြည်လုံးထွက်ခါ ပျော်ကြပါစို့”
ဖိုးစိန်။....။“ကျုပ်တို့ ဘဘကြီးသေတဲ့အခါ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“တပြည်လုံးထွက်ခါ ပျော်ကြပါစို့”
ဖိုးစိန်။....။“ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြောပြန်ပြီ ၀မ်းနည်းသ၀ဏ်လွှာ ပို့ရမှာ လို့ဆိုကြလေကွာ”
အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“တပြည်လုံးထွက်ခါ ပျော်ကြပါစို့ အဲမှားလို့ ၀မ်းနည်းသ၀ဏ်လွှာ ပို့ရမှာပဲ”
ဖိုးစိန်။....။“တော်တော်ချစ်ကြတာကိုး ဘာဝမ်းနည်းသ၀ဏ်လွှာပို့ရမှာပဲလည်း ဖိုးစိန်တယောက် ပျောက်လို့နေဆိုရင် လယ်ထဲရောက်တာတော်တော်ကြာပေါ့ လို့ ဆိုရမှာ ကဲပြန်ဆိုကြ”
ဖိုးစိန်။....။“ငါတို့နိင်ငံရဲ့ ပညာတတ်တွေ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“လယ်ထဲရောက်တာတော်တော်ကြာပေါ့ ”ဖိုးစိန်။....။“ဟုတ်ဘူးလေကွာ ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်တယ် လို့ဆိုရမှာ ဘာမှလည်းမရဘူး ဘာတွေလျှောက်ဆိုနေကြတာလဲ”
ဖိုးစိန်။....။“ငါတို့နိင်ငံရဲ့ ပညာတတ်တွေ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်တယ် ”
ဖိုးစိန်။.....။“အရူးတယောက် လမ်းလျှောက်လာ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်တယ် ”
ဖိုးစိန်။...။“နင်တို့ရူးမှပဲ ပွဲလယ်တင့်တော့..အရူးတယောက်လျှောက်လို့လာ ခွေးတွေဝိုင်းတောင် သူမမှုဘူးလို့ဆိုလေ”
ဖိုးစိန်။.....။“အရူးတယောက် လမ်းလျှောက်လာ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ခွေးတွေဝိုင်းတောင် သူမမှုဘူး”
ဖိုးစိန်။.....။“ငါတို့အမေစု သတိရတယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ခွေးတွေဝိုင်းတောင် သူမမှုဘူး”
ဖိုးစိန်။.....။“ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်းပေးပါလို့ ဆိုရမှာလေ တကယ်ပဲ ဘာတွေဆိုနေကြမှန်းကို မသိဘူးပြန်ဆိုကြ”
ဖိုးစိန်။....။“ငါတို့အမေစု သတိရတယ်”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်းပေးပါ”ဖိုးစိန်။.....။“ပစ္စည်းဥစ္စာ မတည်မြဲပါ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်းပေးပါ”
ဖိုးစိန်။....။တခါဆို တခါသင်နေရတာပဲ ပစ္စည်းဥစ္စာ မတည်မြဲပါ လို့ဆိုရင် မင်းလိုချင်ရင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် လို့ ဆိုရမှာလေ”
ဖိုးစိန်။.....။“ပစ္စည်းဥစ္စာ မတည်မြဲပါ”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“မင်းလိုချင်ရင် ပေးလိုက်ပါ့မယ် ”
ဖိုးစိန်။.....။“မင်းတို့ညီမလေး လှပဂေး”အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။.....။“လက်သီးလိုချင် ဒီမှာ နမ်းထား”
ဖိုးစိန်။.....။“အရင် အပိုဒ်တွေလို မင်းလိုချင်ရင် ပေးလိုက်ပါ့မယ် လို့ ဆိုကြလေကွာ”
အိမ်။......။“ဘာလို့ဆိုရမှာလဲ ငါတို့ကို မအ ဘူးများမှတ်နေလား”
မြစ်ကျိုးအင်း။....။“မင်းလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရအောင် ငါတို့ကို မင်းရဲ့ မဲပုံး များမှတ်နေလား”
အိမ်+မြစ်ကျိုးအင်း။....။“ဘာမှ မချပ်နဲ့ တော်ပြီ မဆိုတော့ဘူး”
ထိုအချိန်တွင် အရှေ့က ကသွားသော မင်းသမီးလေးကောင်းကင်ပြာ မကီကီ တို့နှင့်အတူ မင်းသားလေး
လတ်လတ်ဇော် ပါထွက်လာပြီး လူရွှင်တော် သုံးယောက်နှင့်အတူပရိတ်သတ်ကို လက်အုပ်ချီကာ ဂါရ၀ပြု
ဇာတ်စင်ဘေးတဖက်တချက်မှ ကြက်သွေးရောင် ကန့်လန့်ကာကြီးမှာ တဖြည်းဖြည်းထွက်လာပြီး ပွဲခင်းတခုလုံး
ဤတွင် အငြိမ့်ခန်း တခန်းရပ်ပါပြီ။
၀န်ခံချက်။...။ ဤအငြိမ့်ကို သူငယ်ချင်း အိမ် တဂ် ၍ ရေးပေးပါသည်။
ဤ အငြိမ့်ခန်းတွင်ပါဝင်သော အဖွင့်နတ်သီချင်းနှင် ရေငုပ်သဘောင်္ ပျက်လုံးမှလွဲလျင် ကျန်သည့် သံချပ်များ
ပျက်လုံးများနှင့် စာသားများအားလုံး မည်သည့်စာမျက်နာပေါ်တွင်မှ မရှိသေးသော ကိုယ်ပိုင်စာစုများဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်ပေါ် အငြိမ့်ခန်းတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများပါခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်ကြပါရန်.....။
ဤဘလော့ဂါ အငြိမ့်တွင် နာမည်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သော....မကီကီ
ညီမလေး လတ်လတ်ဇော် (မင်းသမီးလုပ်ဘို့ ဘယ်လိုပြောပြောမရဘဲ မင်းသားပဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေးပါ)
လိုချင်တဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို နှစ်ခေါက်တိတိ ပြန်ရှာပေးသော သူငယ်ချင်း ဂျူ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါ အငြိမ့်(၁) ကို သူငယ်ချင်း အိမ် ရေးထားပါတယ်။
ဇာတ်ကံထရိုက်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ထုံးစံအရ ဒီပွဲခွင်ကို လူဝင်များလျင် နောက်ထပ် ပွဲချီများဆက်ကပါအုံးမည်။
Posted by မြစ်ကျိုးအင်း at 7:39 PM Labels: အငြိမ့်စင်
သံချပ်တော့ေ၇လည်ခိုက်တယ်ဗျား..အဟေးဟေး သေချာတယ် ရွာပြန်ရင် ကောက်မစိုက်ရဘူး ကားပြာစီးရမှာ...ဟားဟား။
အဲဒီဇာတ်ဆောင်တွေအားလုံးနဲ့အငြိမ့် ခွေတစ်ခွေ
အသံထွက်ပြီး ရုပ်ကြွလာလို့ ပိုပြီးမြိုင်သွားမယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ လောက ထမှာလဲ ဒီလို
ပါရမီရှင်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ပါ။
ဘလော့လောကကြီးမှာဒီဇာတ်ဆရာတွေနဲ့ 
သော ဘလော့ ရွာကြီးတစ်ခု တည်ထောင်နိူင်ပါ
အပိုင်း..၂ တွေ ၃ တွေစောင့်ဖတ်ချင်သေးတယ်နော်..
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမောတွေ ပျောက်သွားအောင်
တပြိုင်ထဲ အပြိုင်ရယ်ကြပေတော့ ဗျို့ ၊ချုပ်မထား
ဖျာ တချပ်ဝယ်သွားပါတယ်.. နှစ်ပါးသွားလေး လဲ လုပ်ပါအုံး
အငြိမ့်လေးကို တရေးတမောကြည့်ရှု ဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ... အငြိမ်းလေးလဲ ကောင်းပါပေ့နော်...
မမကီက အငြိမ့်မင်းသမီးပေါ့ သူကတာကြည့်ချင်လိုက်တာ.... ဆက်လက်ကကြပါဗျာ ဆက်လက်ရှုစားပါ့မယ့်ဗျို့
ဟွန်း ငါက သီချင်းကို အကောင်းများသုံးမလားလို့။
ကိုရွာသား တဂ်ကို ရေးမယ်မှတ်နေတာ။
ငါလည်းလူပျက်မလုပ်ရဘူး။ ကျေနပ်ဘူးဟေ့။း)
ဇာတ်ဆရာရေ..ဒီအငြိမ့်ကို ရွာက အလှူမှာငှားချင်လို့ အချင်းချင်း ဈေးလျော့ပေးဦး။ :))
ရယ်မောစွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် ဇာတ်ဆရာရေ..
ဒီနေ့ ည သန်းခေါင်ကျော်ရင် အိမ်အောက် တလမ်းကျော်မှာ
ကားပြာ တွေ တန်းစီ စောင့်နေလိမ့်မယ်။
ဘဘကြီးက ဂုဏ်ပြုချင်လို့ခဏလိုက်ခဲ့ စမ်းဘာ ဒဲ့....
ကွန်ပူတာကြီးထဲမှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံး တော့ပ်စီးကရက် တွေ .. တော်ရာ ဝှက်ထားပါ ..
လင်းယုန် မှ တောကြောင် .. တောကြောင်မှ မြေခွေး..
ဂိန် ... အိုဗာ ...အိုဘာတယ်...
ခိခိ .. စတာ...
ရွာပြန် ရင် အပိုင်စား ပေးမယ် ရွာစားအတွက်
အစ်ကိုရေ ပန်းနေတာတွေ ပြေ လွမ်းနေတာ တွေလည်း ပျောက်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ လက် ရာပဲ။ တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ အစ်ကိုမြစ် တော် ချက်ဗျာ။ သဘာလေးက စ ကား ပြောတယ် ထင်ရဲ့လွှတ်ကောင်းတယ်ဗျို့ ။ လက်စောင်းက ထက်တယ်ဗျာ ဂွတ်ရှယ်ပဲ ....
(မန့် ရင်းနဲ့ မျက်နှာကြီး စပ်ဖြီးဖြီးဖြစ်လျှက်)
စကားမစပ် မြန်မာပြည်ပြန်အုံးမှာလား ပြန်မယ်ဆိုရင် လာကြိုမယ်သူ အဆင်သင့်နေမှာနော် :P
ဟဟ ကိုကျိုးရေ လုပ်လှချည်လားဗျ
အဟတ် ဂျစ်ညီမလေးက မင်းသားတဲ့လား
အမားကီက မင်းသမီးပေါ့ ချစ်အကိုတွေက လူပျက်တွေ
အဲ့လေ လူရွှင်တော် တွေ
ဆိုင်းဆရာလည်း အခြေအနေမကောင်းလို့ ဘလောက်ပါ ပိတ်လိုက်တယ် အဟတ်
တော်သေးတယ် အရက်သမားက ပွဲဆူအောင်မလုပ်သွားလို့အဟတ် စတာ
ကောင်းပါ့အားပေးပါတယ် .. ဆက်ရေးပါ (၃)ကိုမျှော်နေမယ်
ပြုံးတော်မူ ပတ်ပျိုး ဘဲဗျာ ... ရေးတတ်ရေးတတ်တယ်
စဉ်းစားရတာ ရေးရတာနဲ. အချိန်တော်တော်ပေးရမှာ
ဘဲဗျာ တကယ်ကိုသရုပ်ပါတယ်ဗျို.345...
မျှော်နေမယ်ဗျို. ... :)
တယ်လည်း တတ်နိုင်ပါလား ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ၊ တကယ့် အငြိမ့်ကနေတာ ကို မျက်စိထဲမြင်လာပြီး တ၀ါးဝါး အော်ရယ်နေရတယ်။
ချစ်သူchatနေ သီချင်းလေး ကြိုက်လွန်းလို့ကူးသွားတယ်။ :D
ဘလော့ဂါအငြိမ့်ကို အစအဆုံး ၏သည် မလွဲ ဖတ်ရှုသွားပြီး တကယ်ဘဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။
ဘလော့ဂါအငြိမ့်မှသည် စင်ပေါ်အငြိမ့်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
FB မှာ ကိုဧရာဝတီသားတင်ထားတဲ့ ချစ်သူချက်နေသီချင်းကိုကြည့်ပြီး ရောက်လာတာ..... ရီလိုက်ရတာအစ်ကိုရယ် ရေးတတ်ပါ့. :)
နက်က ခုမှ ကောင်းကောင်းတက်လို့ အငြိမ့်လေး ပြေးလာကြည့်တယ်။
ရယ်ရလွန်းလို့ အိပ်တောင် ပျော်တော့မယ် မထင်ဘူးဗျာ။
နောက်ထပ် အငြိမ့်သဘင်လေးတွေလဲ မကြာမကြာ ခင်းကျင်း ပြပါလို့ ပရိတ်သတ်ကြီး တောင်းဆိုပါတယ်
မင်းသမီး လာတယ်၊ လူရွှင်တော်တွေ ဘယ်ရောက်တုန်း၊ တယောက်ထဲ့ ကသွားလိုက်တယ်၊
ကဲ ကပြီးပြီ၊ ပြန်ပီး)
good idea ,best writing,made happyness,thank u very much.
ကောင်းလိုက်တဲ့အငြိမ့် ရယ်လိုက်ရတာ အူကိုနာနေတာပဲ။ အမှန်တရားတွေကို ပြောသွားတယ်တော့ မမကောင်းကင် အငြိမ့်ကမယ်လို့ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မျက်စိထဲမှာ မြင်မိတာက အော် ကွမ်းလေးများဝါးနေမလားဆိုပီး စမလို့လုပ်တုန်း တကယ်ကိုပါလာတာပဲ။ မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကိုမြင်သွားတယ်။ ရယ်လိုက်ရတာ။ ပျော်တောင်ပျော်သွားတယ်။
PS နောက်ထပ် အငြိမ့်ပွဲလည်းကပါဦးနော်။ နော်ဝေမှာလာကပါလားဟင် အဟီး
"တားတားရဲ ရိုက်မယ်..တားတားရဲ ရိုက်မယ်" လုပ်နေလို့ ပရောဂဆရာနဲ့ပြထားရတယ်...
လူဝင်များရင် ပွဲဆက်မယ်ဆိုလို့ တယောက်ထဲ နှစ်စောင်ဝယ်ကြည့်သွားတယ်...
ဒီတစောင်က "သားသားလဲ လိုက်မယ်" လို့ မိန့်တော်မူထားတဲ့ ဘဘုန်းကြီးကိုလှူမလို့....
ဟားဟား... တကယ်ပဲ လက်ရာတွေ အတွေးတွေ ဆန်းသစ်တယ်ဗျာ...
ညစ်နေတဲ့စိတ်တွေ ဖိစီးမှုများနေတဲ့ စိတ်တွေ ပျောက်သွားသလိုပဲဗျာ...
မနက်စောစောစီးစီး အငြိမ့်ကြည့်လိုက်တာ ရယ်ရလွန်းလို့ အူတောင်နာတယ်။ :D နောက်ထပ်ပွဲချီတက်မယ်ဆိုလို့ မျှော်နေပါပြီ။
အတိုင်အဖောက်ညီပါပေ့။ အပြင်မှာလည်း ဒီအဖွဲ့ကို တကယ်ကစေချင်တယ် :)
ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကိုရာ..အငြိမ့်ကို အဲလိုစာနဲ့ တခါမှမဖတ်ဖူးဘူး..မျက်လံုးထဲမြင်အောင်ရေးတတ်လိုက်တာ..တော်တော်လည်းကောင်းတယ်..တော်တော်လည်းရီရ တယ်..ဟားဟား...
ရယ်လိုက်ရတာ။ အရမ်းလည်း သဘောကျတယ်။အပြင်မှာတောင် ကြည့်ချင်မိပါတယ်။
ဘလော့ဂါအငြိမ့်တဲ့ ကောင်းလိုက်တာနော် လူရွှင်တော်တွေအကြောင်း မိတ်ဆက်တာရယ်၊
အငြိမ့်သီချင်း၊ ဘလော့ဂါနီတိ၊ နှစ်ပါးသွားအက၊ မင်းသားရဲ့ငိုချင်း၊ သံချပ် အားလုံး အားလုံး ပြည့်စုံပါတယ်
စာဖတ်သူအားလုံးပြုံးပျော်ရွှင် ကြည်နူးစေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစား အငြိမ့်တစ်ပွဲအဖြစ် ဖန်တီးပီပြင်အောင် ရေးသား
ပေးတဲ့ ကိုမြစ်ကျိုးအင်းကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါအငြိမ့်ပါ ဘလော့မရေးပဲနဲ့ အငြိမ့်ထောင်စားလို့ရပြီ
လူရွင်တော်တွေတော့ ငတ်ပါပြီ :P
ဆက်ကပါ.. ရှေ့ဆုံးဖျာကို စာရင်းပေးသွားတယ်။ ရော့.. စရံငွေ.. ဒီမှာ။
ဟာသ ဥာဏ်ရွှင်တယ် ပြောရမလား ပဲ... ။ တော်တော် ရယ်ရတယ်...။ လူရွှင်တော် လုပ်စားလို့ ရပြီ..သိလား..း))
၃ တွေ ၄ တွေ မျှော်နေမယ်ဗျို့
သီချင်းတွေရော ကကွက်တွေရော ပြက်လုံးတွေရော
တကယ့်ကို အဆင့်မီတယ်ဗျို့ ဟီးဟီး
အခု ဒီမင်းသား ဒီမင်းသမီး ဒီလူရွှင်တော်ပဲနော်
ကြိုတင် စရန်သတ်သွားပါတယ်ဗျို့ ခွိခွိ
ရီရတယ်၊ ကြိုက်တယ်။ ဘလော့ဂါ အငြိမ့်(၁) ကို အိမ် ရဲ့ ဘလော့မှာမတွေ့ ဘူး။ ကြိုက်လွန်းလို့ ထပ်ဖတ်ချင်သေးတယ်။
ကျနော်ကလဲ ကိုဂျီးအိမ်ကို အားကျမခံ တစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့က ၅တစ်လုံးက ခံသွားတာကြောင့် ၅၁ပါတဲ့။ ဟိဟိ။
ကြိုက်တယ်ဗျိုးးးး ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို။ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ကိုကျိုးရာ။ =D
အဲ့ဒါ ဘူလေးလဲဆိုတာ အနော်တိဖူးနော်။ ဟီး။ အနော် နှာစေးနေတာ အတော်ကြာပြီ။ ခွိခွိ။
ဟာဂျာ။ ကျနော်နဲ့ ဖွားကိကို တွဲပေးထားရလားဗျ။ ကျနော်က နုနုဖတ်ဖတ်လေး။ ခုမှ ၁၆နှစ်ကို ရက်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်စွန်းစကို။ ဖွားကိကဖြင့်။ ဟိဟိ။ ကျောဝူး။ ဖွားကိကြီး လိုက်ရိုက်တော့မယ်။ ဟီးဟီး။
"ဗိုလ်ချုပ်မှာ ဆိုမှတော့ ငါလည်း စကားလိန်နဲ့မေးတာထင်ပြီး ဗာဂျာမှုတ်လို့ ဖြေလိုက်မိတာ”
ဟားဟား။ အူတောင်နာတယ်။ ရီရတာ။
ကျနော့်ကို ခေါ်တာ အတော်ကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ကို ခေါ်လိုက်တာကိုးဗျ။ ကျနော်တောင် ရင်ခုန်သွားတယ်။ ဟားဟား။
ဟာဂျာ.. ဟာဂျာ .. တူလုပ်မှပဲ တူများလဲ ပေါ်ကုန်ပြီ ချစ်သူမလာတာတွေ။ မျက်နှာပူလိုက်တာ။ ဟီး။ ဒါပေမယ့် ကို့ကိုတော့ အဲ့သီချင်း ပြန်ဆိုပြပလိုက်ဦးမယ်။ ဟီးဟီး။
သံချပ်ကာတွေကတော့ ရေလည်ဂွတ်ဗျိုးးး။ ကိုဂျီးအိမ်ပြောသလိုပဲ သေချာတယ်။ ကားပြာကြီးနဲ့ ညားတော့မှာကို။ ဟီး။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ နောက်ဆုံးပိတ် စာရင်းချုပ်လိုက်ရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အလွန့်အလွန်ကို ကောင်းသော အငြိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မင်းသားလေး ဇော်ပေါ့ခင်ညာ။ ခွိခွိ။ နောက်က ၀ိုင်းရိုက်ကြတော့မယ်။ ဟားဟား။
နောက်လဲ ရေးပါဦးဗျိုးးး။ မဲအားလုံး ကျနော်တစ်ယောက်တည်းပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ အားပေးတယ်ဗျိုးးး။ ရေလည် ရီရလို့။ ဟားဟား။ =]
မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ရင် လာမကြိုမှာ မပူရဘူး သိလား ကိုမြစ်ကျိုးအင်း ကားပြာလေးတွေ လာကြိုလိမ့်မယ် အဟက်
ရယ်ရတယ် ဗြဲဟဲဟဲ ဟဟဟ ဂယ် ရယ်ရတယ် ဟိဟိ
ဆက်ရေးပါ။ (ပို့ပါတယ် ဘယ်ရောက်ရောက် အရောက်ပို့ပါတယ်)
အပေါ်ကလူတွေ ပြောသလိုမျိုး ရှယ်ရီပါတယ် ဟဲ ဟဲ ပြောရမယ်။
sorry အမြဲနီတဲ့တစေနီမောင်ပိုင်ရေ......မအားလို့ရယ်တခြားလူမှုရေးပြဿနာလေးတွေရှိနေတာကြောင့်မင်း BLOGတွေကမဖတ်အားတာ..အခုမှဖတ်ဖြစ်တာ......မဆိုးဘူးစာဖတ်ရပြင်းတဲ့ငါတောင်စာဖတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်...ပြောပြီးသားလေ......မင်းစာအရေးသားတော်တော်ကောင်းတယ်လို့...စာရေးဆရာသာလုပ်ပါတော့ဟာ...........တော်တော်လည်းရယ်ရတယ်.......နောက်အားလည်းဖတ်အုံးမယ်စိတ်ချ......ဒါနဲ့...နောက်တစ်ပတ်.....သရဲနီနဲ့....အာကြီးတွေ့ကြပြီပေါ့ကွာ....အာကြီးကလည်း.....သူကိုနိုင်မယ့်အသင်းကိုစောင့်နေတာ.....တစ်ခုတော့ရှိတယ်.......မင်းသရဲနီတွေ...မနေ့က.....liverpool အိမ်ကွင်းမှာအရှုံးနဲ့မရင်ဆိုင်ရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ...ဘောလုံးဆိုတာ..လုံးတယ်..သိတယ်မှတ်လား......ဟီးဟီး ဒါဘဲ.... ;)
အားပါး လန်းတယ်ဗျာ... တကယ်ပဲ လေးစားတယ်... အဲလိုရေးနိုင်တဲ့လူမျိုး အတော ရှားတယ်ဗျ။ အားပေးပါတယ်ဗျာ... အဆင်ပြေရင် ဆက်ရေးပါအုန်းဗျာ...။
ဟားဟား.. ဖတ်ပြီးသွားပြီ... သံချပ်ကို အဘောအကျဆုံးပဲ.. အတိုင်အဖောက်ကတော့ ညီပါ့ဗျာ..
ကိုကြီးမြစ် တစ်ယူပါတယ်။ ဟဲဟဲ
နောက်ဆုံးကနေ ရေရင် တစ်ဟိဟိ။
ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒဒွေးမှာ ပွဲလုပ်မယ်ကြားတယ်။
အဲဒီအခါတော့ ဒီအဖွဲ့ ကိုငှားရမယ်။ ဟဟားးး
သမီးက အငြိမ့်ဆို သိပ်ကြိုက်တာ။။။။ ကလေးမှာ လာကတဲ့ အငြိမ့်မှန်သမျှ၊ ဘုရားပွဲတွေ အကုန် ရောက်တယ်။ ရန်ကုန်က စမ်းချောင်းရှင်စောပု မှာတစ်ခါသွားကြည့်တယ်။ ရှေ့ ဆုံးက ကလေးတွေကြားထဲ တဟားးဟားးး အော်ရယ်နေလို့ စမ်းချောင်းလမ်းက လူတွေ အကုန်နီးပါးမှတ်မိတယ်။ ဘုရားပွဲမှာ အော်ရယ်တဲ့ကောင်မလေးတဲ့။ ဟဟားးး
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လိုက်ဖ် အငြိမ့်လေးကို အရှေ့ဆုံးက ထိုင်ကြည့်ရတဲ့ အရသာလေး နဲ့လာခံစားပါတယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ် ကိုကြီးမြစ်ရေ....
ကိုအိမ်ရေးကတည်းက ကိုမြစ်ကျိုးအင်းကို တဂ်တယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတာ။ ဖတ်ပြီး ရယ်သွားပြီ။ :)
ဟာသရသ အပြည့်အ၀ ခံစားလိုက်ရတယ် ။
စာရေးကောင်းတာ အားလုံးသိလို့ ထပ်မချီးကျူးတော့
ဘူးမောင် ။ ဒီတစ်ခါ ပို့စ်လေးက ရေးနေကြပုံစံလေး
မဟုတ်တော့ ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်နေတယ် ။
သုံးလေးခေါက်ပြန်ဖတ်ပြီး ပြုံးရယ်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ။
မောင့်ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း မြတ်နိုးစွာနဲ့ အားပေးနေသူပါ ။
ဘယ်နေရာ ဘယ်ကိုရောက်ရောက် မောင့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးပါ ။
ဒီပို့စ်လေးကို တဂ်တဲ့ “အိမ်”ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ ။
ဘလော့ဂါ အငြိမ့်(၁)လဲ သွားအားပေးပြီးပါပြီ ။
စိတ်ကူးလေးတွေ သိပ်ကောင်းကြတယ် ။
လန်းဆန်းဂွမ်း တယ်ဗျာ :)
ညီ မအားလို့ အလည်မရောက်တာ ကြာသွားတယ်..။
အစ်ကိုတော် ရေးတာလေးတွေလည်း ကောင်းမှကောင်း
အားလုံးကို အဆင်ချောလို့ ..။
အငြိမ့်ခွင်ရေးတယ်ဆိုတာက စာဖတ်အားကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာအားလည်းကောင်းမှ။
နောက်ပြီး ဗီဇ၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းရတယ်။ နဂို ဟာသဥာဏ်ရှိရမယ်။ အိုအများကြီးလိုအပ်တယ်လေ။
ဒါပေမယ့် သံချပ်တွေက သိပ်မရီရသလိုပဲ။
စာအရေးကောင်းတာ သိပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ကိုအင်း
အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ ။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ ။
ဂျစ်တူးတို့ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ ကိုအင်းကိုတော့
အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ ။
ခုံနံပါတ် ၆၈ က နေ လာ လာအားပေးသွားတယ် ကိုကျိူးရေ
ဒါကြောင့် အငြိမ့်(၃) ကို
ဆက်ကဖြစ်အောင် ကပေးပါလို့ 
ညဘက်ပွဲ လာကြည့်တာ အိပ်ချင်တောင်ပြေသွားတယ်
မျှော်နေမယ် နော် အငြိမ့်၃ ကို
အဟမ်း.... အဟမ်းးးးး အဟမ်းးးး
ပြည်သူချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ လူရွှင်တော် ဖိုးစိမ် ပြန်လာပီးလေ...
ဖိုးစိမ် က အငြိမ့်သမလေးနဲ့ ကလာကာ နောက်ကွယ်မှာ နှစ်ပါးခွင် နဲ့ ဂွင်ဆင်နေတာဆိုတော့...
အရှေ့မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဘာတွေ ကျိုးနေလဲ ဆိုတာ မသိဘူးဗျ.....
အဲဒါတော့ ဖိုးစိမ်ကို ဆော်ဒါဗျ... လူရွှင်တော် အချင်းချင်းနော်...
ဖိုးစိမ်က တရော်လောက် ရုံပတေသီးလောက်ချွဲတတ်တာကိုး......
ကျနော်က အငြိမ့်ဆိုရင် အသေကြိုက်တာ....
မော့စ်... မိုးဒီ... ငြိမ်းချမ်း... ကောင်းကျော်..
ရှဲဒိုး.... မန်းဝင်း.... ခင်လှိုင်...
စသဖြင့်... သူတို့တွေက ကျနော့်ဘဝမှာ
ခုလို ကိုယ်ပိုင်ရေးထားတာဖတ်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ ဝင်က ရရင် ဘယ်လောက်များ ပျော်စရာကောင်းလောက်မလဲလို့ရေ....
အရေးအသားတွေက ထိတယ်... မိတယ်...
ကိုယ်တိုင်လူရွင်တော် ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လဲ ကျေနပ်တယ်...
ကိုမြစ်ကျိုးရေ... လက်မှတ် ၂စောင် ရလို့ အငြိမ့်လာကြည့်သွားပါတယ်။
တကယ်ကောင်းတဲ့ အငြိမ့်ပါပဲ။ ဒီတစ်ပတ်လုံး ပင်းပန်းနေတာတွေတောင် ပျောက်ကုန်ပါရောလားဗျာ။
ပရိသတ်က သောင်းသောင်းပြပြဆိုတော့ နောက်တစ်ပွဲကဖို့ အားယူထားပါအုံးဗျို့။ ကျန်းမာရေးတော့ အထူးသတိချပ်ပါ။ ကျန်းမာမှ အငြိမ့်ကလို့ရမှာနော့။
ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ..ရယ်ရတာ တွေးတွေးပြီးတော့ကို ရယ်ရတယ်..တကယ့်ကို တော်ပါပေတယ်...မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်အောင်ကို တော်တယ်...ညစ်နေတာတွေတောင် ခဏလေးမှာ မေ့သွားတယ်...နောက်အပိုင်းလေးတွေလဲ မျှော်နေပါတယ်နော်...
တက်ဂ်ထားတဲ့အကြောင်းလာပြောရင်းနဲ့ ဘလော့ဂါအငြိမ့်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖတ်သွားပါတယ်။
ဟား.. ဟာ.. ဟာ..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ အငြိမ့်ဗျာ..
ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ.. ရုံက လူတွေပြည့်နေလို့
မပြန်ဖြစ်ပဲ မိုးလင်းထိ ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ..
မင်းသားရဲ့ လွမ်းချင်းကလည်း ပြိုင်းစံရှားပါ့
အခုလို တင်ဆက် ကပြ ဖျော်ဖြေ သွားကြတဲ
...................တို့ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ပြောကြားရင်းနဲ့ နောက်နောင်များမှာလည်း အခါခွင့် ကြုံကြိုက် လာရင် ....
ဖျော်ဖြေမှု ကို ပြန်လည် စောင့်မျှော် နေမိပါကြောင်း
ဒီနေ့မှ အခွေထွက်တာလားမသိဘူး...။ အငြိမ့်က တုန်းက လက်မှတ်မ၇လိုက်လို့အခုမှ ကြည့်ရတယ်ဗျို့ နှစ်ယောက်သား ကြည့်ရင် ရယ်နေရတယ်ဗျိူ .. တော်တော်ရယ်ရပါ၏..... :) နောက်ထပ်လည်းမျှော်နေပါ့မယ် ...။
မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်လာတယ်ဗျာ ....
တကယ်တကယ် ... :)
နောက်တစ်ခွေ အဲ နောက်တစ်ခါ ဆက်ဆက်မျှော်နေမယ်
တကယ့်ကို အံ့မခန်း ပညာစွမ်းတွေပါလား ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ..
တကယ်လေးစားပါတယ်ရှင် အငြိမ့်ခန်းဆင်သွားတာ တကယ့် ပညာရှင်လိုပါပဲ ဦးလေးဦးသူရ ဇာဂနာပြန်ထွက်လာရင် အဲ့အငြိမ့်ပို့စ်လေး ပေးဖတ်ဦးမှ သူလေးစားသွားမယ်..
အရမ်းကောင်းပါတယ် ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ... တကယ့်အငြိမ့်ကို ကြည့်နေရသလို ခံစားရတယ်... နောက်အပိုင်းတွေ ဆက်စောင့်နေပါ့မယ်.. ဒီတစ်ခါ ဇာတ်ဆရာ ဘယ်သူပါလိမ့်..
အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးလုံးကောင်းတယ် တကယ်ပြောတာ ကိုကြီး သုဒြေ္န
အခုမှပဲ ရောက်ဖြစ်တယ် ရီရတယ်ဗျာ
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ဘယ်လိုမှ မဟန်တော့လို့ ခဏရပ်လိုက်ရတယ် .... သေအောင်ရယ်ရတယ်...
အစ်ကို့ရဲ့ အငြိမ့်ပွဲကို ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ချိန်ခိုးမကြည့်ရလို့ ရှေ့ဆုံးမှာ ရေးသင့်ပြီနော်...။
အပြင်မှာ တစ်ကယ်ဘလော့ဂါအငြိမ့်လုပ်ချင်စိတ်တွေတောင် ပေါ်လာတယ်နော်....။
နံပါတ် ၃ ကိုဖတ်ပြီးတော့ နံပါတ် ၂ ကို လာဖတ်ပါတယ်.... ရယ်ရလွန်းလို့ အူတက်မတတ်ပါဘဲ။ ...
ဖတ်ရတာ နောက်ကျတယ်ဗျာ ...
နောက်ကနေ ပြန်ဖတ်နေတာဆိုတော့ ...
ဘလော့ဂ်ဂါ အငြိမ့် (၅) က ရေးပြီးပြီလား
မသိဘူး ဗျာ ... :)
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#odfwu]buy cialis[/url] - cialis online , http://buycialispremiumpharmacy.com/#fzhhb buy cialis online
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#bzxak]buy viagra[/url] - buy viagra online , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#saegt viagra online
[url=http://buyonlineaccutanenow.com/#piomf]accutane without prescription[/url] - cheap generic accutane , http://buyonlineaccutanenow.com/#ivcly buy accutane online